रवि लामीछानेको भावुक उद्घोष :जेल नपरे सिधा कुरामा भोली भेट्छु (भिडियो सहित) - Nepali news..
रवि लामीछानेको भावुक उद्घोष :जेल नपरे सिधा कुरामा भोली भेट्छु (भिडियो सहित)
काठमाडौं । टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेको बारेमा अध्यागमन विभागले मुख खोलेको छ ।
लामिछानेले अबैधानिक रूपमा काम गरिरहेको उजुरी परेपछि उनको भिसाको बारेमा प्रेस काउन्सिलले अध्यागमन विभागसँग जवाफ मागेको थियो । काउन्सिललाई जवाफ लेख्दै अध्यागन विभागले लामिछाने आगामी अक्टोबर ४ सम्म नातेदार भिसामा रहेको र यस भिसामा कुनै पनि काम गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ ।
लामिछानेसँग अमेरिकी पासपोर्ट रहेकाले उनको वैधतामाथि प्रश्न उठेको हो । अमेरिका बसेर ४ बर्ष अघि नेपाल फर्किएका रविले एउटा निजी टेलिभिजनमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, उनले लिएको भिसा अनुसार रविले नेपालमा कुनै काम गर्न नपाउने अध्यागमन विभागले प्रष्ट पारेको छ ।
अध्यागमन विभागले मुख खोले लगतै रविको बारेमा सामाजिक संजालमा जेल पर्ने कुरा व्यापक रुपमा भाइरल पनि भैरहेको छ । यी समाचारको खण्डन पनि रविले गरेका छन् साथै उनले आफ्नो फेसबुक लाइभ पेजमा आएर भोलि सम्म जेल परेन भने साँझको कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने छु भन्दै आफ्नो कुराहरु राखेका छन् जुन तलको भिडियोमा हेर्न सक्नु हुन्छ ।
Prevएउटा गीतबाट चर्चित बनेका अशोकलाई आयो चलचित्र खेल्ने अफर, तर टंक बुढाथोकीले किन रोके ? (भिडियो सहित)
Nextअशोक दर्जीको घर निर्माणको लागि मलेसिया पछि कोरियाबाट पनि सहयोग आयो, कोरिया बाट कति सहयोग आयो अशोकलाई ? (भिडियो सहित)
मनिष लिम्बु र मेलिना राईको पहिलो गित ‘ढिलो जन्मेछु’ बजारमा – हेर्नूहोस (भिडियो सहित)
एसइई परीक्षामा चिट चोर्ने चोराउनेलाई एक लाख जरिवाना..